Iprojekthi yeMicrosoft xCloud beta ye-iOS ngoku iyafumaneka | IPhone iindaba
Iprojekthi yeMicrosoft xCloud beta ye-iOS ngoku iyafumaneka
I-Stadia yinkonzo yokuqala yomdlalo wevidiyo esivumela ukuba sonwabe kwiselfowuni ye-Android, ayifumaneki okwangoku kwi-iOS, kwiPC okanye kwimidlalo yokududuza ngaphandle kokukhuphela naluphi na uhlobo lomxholo kwisixhobo sethu. Yeyokuqala kodwa ayizukuphela kwayo, ukusukela IMicrosoft nayo isebenza kwinkonzo efanayo.
Sithetha ngeProjekthi xCloud, inkonzo yemidlalo yokusasaza yeMicrosoft esisicelo sayo ngoku iyafumaneka kwi-beta kwi-iOS ngeTestFlight, isigaba sokuqala esigubungele ngokukhawuleza abavavanyi be-beta abangama-10.000 XNUMX ababejonge ukuvavanya ukusebenza kwayo.
Ngokungafaniyo ne-Xbox Game Streaming app efumaneka kwi-Android kwi-beta, i-beta iyafumaneka kwi-iOS yeProjekthi xCloud. Umahluko phakathi kwezi nkonzo zimbini kukuba eyokuqala, i-Xbox Game Streaming ifuna iXbox Ukwazi ukonwabela izihloko ebezithengiwe ngumthengi ngaphambili okanye ezifumanekayo ngeXbox Game Pass, ngelixa iProjekthi xCloud ikuvumela ukuba uyonwabele imidlalo ekhoyo yeXbox ekhoyo ngaphandle kokuba nekhonsoli.
Isihloko kuphela ngoku esifumaneka ngale Projekthi yeMicrosoft xClou beta Halo: The Master Collection oyiNtloko. Esi sisihloko sokuqala sezihloko ezingaphezulu kwe-3.500 ezifumanekayo kwi-Xbox iMicrosoft efuna ukuyinikela kule nkonzo intsha yokusasaza umdlalo kule minyaka izayo.
Iprojekthi xCloud iimfuno ze-iOS
Ukuba sinethamsanqa ngokwaneleyo ukuba sisayinile kwaye safumana i-beta ukuzama le nkonzo, kufuneka iakhawunti yeMicrosoft, isilawuli esingenazingcingo seXbox (ayihambelani nolunye ulawulo okanye ulawulo lokuchukumisa) kwaye i-iPhone yethu okanye i-iPad ilawulwa ngu iOS 13 okanye ngaphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » Iprojekthi yeMicrosoft xCloud beta ye-iOS ngoku iyafumaneka
Ukuveliswa kwezixhobo zeApple ukusuka eTshayina ukuya eTaiwan
Isigqeba soMculo seWarner sijoyina amanqanaba eApple Music